Col. Barre Hiiraale Oo Wada Qaab Lagu Sheegay Waan Waan Loogu Talagalay Inuu Ku Maquuniyo Fikirka Ay Hogaamiye Kooxeedyada Muqdishu Uga Soo Horjeedaan Col. C/Llaahi Yusuf
Buluugleey, November 11, 2005
Col. Barre Hiiraale ayaa dhambaal uu u diray xafiiska QM ee Nairobi wuxuu ku sheegay qorshe uu soo diyaariyey oo lagu heshiisiinayo Col. C/llahi Yusuf iyo Shariif Xasan Aadan. Qoraalkaas oo uu Barre ku xaqiijiyey in labadaas hogaamiye ay kawada hadleen heshiiska uu wado ayana isku afgarteen in la qabto isaragaas.
Hadda ka hor ayuu Col. Barre Aadan Shire mar uu safar ku soo gaarey Muqdisho bishii September sannadkan ayaa dadaalkiisa dib u heshiisiinta waxaa shaki ka muujiyey kooxda Muqdisho oo aragtidoodu ay ka soo horjeedo kooxda garabka Jowhar, wax jawaabana kama aysan bixin waan waanta uu la soo boodey Barre.
Waxaan kooxda Muqdisho aan u cadeyn waxyaabaha ka dambeeya waan waanta uu la roorayo Col. Barre Hiiraale. Siyaasiyiinta Muqdisho waa ay u cadahay ineysan ahayn mid ujeedadeedu ay tahay in si daacada loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya kooxaha Muqdisho iyo Jowhar. Waxaa la isweydiinayaa in Col. Barre uu qeyb ka yahay shaxda guud oo beel ahaan uu ku qanacsan yahay in awooda Muqdisho gacanta hogaamiye kooxeedyada Muqdisho laga saaro.
Col. Barre Hiiraale iyo Col. Cabdullahi ayaa waxey is tuseen iney iska kaashadaan sidii ay beeshooda guud degaanka webiga Jubba milkiyadiisa ay gacanta ugu dhigi lahayeen. Qorshahaasna uu qeyb ka yahay sidii loo caburin lahaa hogaamiye kooxeedyada Muqdisho, looguna go’doomin lahaa in lagu sii jeediyo qalalaasaha laga soo aloosayo Jowhar.
Siyaasada Col. Barre Hiiraale aya hadda u muuqata mid ku dhisan beerdulucsi looga dan leeyahay in lagu kala jebiyo kooxda Muqdisho, ujeedaduna ay tahay in laga reebo kooxdaas hogaamiyeyaasha ka soo jeeda beelaha kale iyo kuwa aysan adkeyn fikirkoodu oo ah dheeli raaca.
Isla markiiba waxaa ka soo yeertay kooxda Jowhar iney arrintaas diyaar u yihiin, si dadbana ay ku tilmaamayaan in kooxda Muqdisho ay ka soo horjeedaan dadaalka uu wado dagaaloogaha Kismaayo. Nuxurka yeelmadaas ayaan ahyn mid daacada, laakin looga dan leeyahay in maalinba qof laga diro kooxda Muqdisho si aragtida guud ee siyaasadooda loogu soo koobo mida beelahooda.
Dadka intiisa badan ayaa qaba in marka hore fikradaas waan waanta ah laga soo bilaabo kooxda Jowhar, lana maqlo fikirka ay qabaan inta badan kooxdaas intii lagu soo koobi lahaa ogolaanshaha Col. Cabdullahi. Waxaan shaki lahayn marka qof ka mida koox fikirkoodu hal dhinac yahay loo soo dhiibo shirqool siyaasadeed oo afka murti nabadaha ka wada, niyadana cadowtinimo beleed ka unkaya iney leedahay halista ay wadato oo ah in isla kooxdaas ku keeni karta in qaarna ay diidaan qaarna ay rumeystaan oo sidaas kooxdaas ku kala tagto.
Kooxda Jowhar kama muuqato saan saan tanaasul dhow ee yaan waxaan natiijo lahyn wakhti la idsaga dhumin . Diblomaasiyiin shisheeye oo la soo kulmay kooxda Jowhar ayaa waxey sheegeen in howlaha waan waanta ay weli yihiin kuwo carduna oo aysan fari ka qodneyn loona baahan yahay wakhtigu inuu bisleeyo oo hanweynida ay meesha ka baxdo. Dadaalka Kismaayo laga wado waa mid u dana dib u heshiisiinta beelaha Barre iyo Cabdullahi ee ma aha mid loogu daneynayo Jowhar iyo Xamar midna.